Hadal uu Axmed Ould-Cabdalla ka jeediyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. [Akhris …] – Radio Daljir
Wakiilada Joogtada ah,
Mudanayaal iyo Marwooyinba,
Waxaan ku faraxsanahay fursadatan aan warbixinta ku siinayo Golaha Amaanka.
In kastoo xaalada ay weli tahay mid jilicsan haddana waxaa jira arrimo horumar leh oo ka dhacaaya Soomaaliya sidaan horey ugu sheegay Golaha Amaanka haddana arin ugub ah ayaa Soomaaliya laga hirgelinayaa. Inkastoo caqabado badan jiraan, haddana Xukuumadu weli waa dagaalamaysaa waxayna iska caabinaysaa iskudayo fara badan oo la doonaayo in lagu afgembiyo awoodana si sharci darro ah looga qabsado. Waxaa kale oo ay Xukuumadu la la dagaalamaysaa kana guuleysanaysaa 20-sanno oo arimaha Soomaaliya shaki laga qabay.
Waxaan rumaysanahay maanta in arintu ay isbedel samaynayso. Waxa cad in dadweynaha iyo Odoy dhaqameedyaduba ay ka soo horjeedaan Qaska iyo kuwa ka dambeeyaba. Sidaasi darted, waxaa si aad ah hadda loogu baahan yahay teegarada bulshada caalamka. Haddaba, waxaan mar labaad rabaa inaan ka mahadceliyo kaalmadii aan caadiga ahayn ee ay ku deeqeen Xubnaha Ururka Islaamka Aduunka, kan Jaamacada Carabta, Kan Ururka Midnimada Africa, Kan Ururka Midowga Yurub iyo Kan Ergada Reer Yurub, Kan Guddiga La Xiriirka ee ay ka mid yihiin Dawlada Mareykanka, Norwey, iyo Ururo Kale gaar ahaan Urur Goboleedka IGAD. Kuwaasoo si dhaqso leh kaalmo u diyaariyey ugana muujiyey dalka gudihiisa taaso waafaqsan balanqaadkii shirweynihii BRUSSELLS bishii Abril si loo fududeeyo arinta deeqda ah, Xukuumada Soomaaliyeed waxay heshiis la gashay Hay?ad Caalami ah ee qaabilsan Xisaabaadka si loo xaqiijiyo in wixii hanti ah ee la helay si hufan loo isticmaalay.
Xukuumadu waxay talaabo weyn ka samaysay dhinaca tababarka, Qalabeynta iyo mushaarsiinta Ciidamadeedaba, Hase ahaatee, weli baahi weyn ayaa ka jirta dhinaca iskuduba-ridka iyo Ciidan ahaantuba, dhinaca kale geedi socodka Siyaasaduna horey ayuu u socdaa, heshiiskii lagu saxiixay Jabuuti ee bishii hore ee Augost ayaa weli u furan kuwa doonaaya in si nabadgelyo ku jirto wax ka qabtaan arimaha Soomaaliya. Dhowaan waxaa heshiis muhiim ah kala saxiixday Xukuumada iyo Kooxda aadka loo ixtiraamo ee AHLU SUINNAH WAL JAMEECA, kuwaasoo durbadiiba muujiyey natiijo, waxaa kale oo jira in qaarka mid ah mucaaradka Xukuumada lagu soo daray midka mid ah Madaxda Mucaaradkana wuxuu noqday Wasiiru Dawle, Siyaaadan albaabkeedu furan yahay. waa in ay weli sii socotaa
Waxaan fahamsanahay in ay Xukuumadu ay soo dhaweyn doonto kuwa hadda mucaaradka ah ha ahaadeen kuwa Madaxda ah ama kuwa Xubnaha ka ah mucaaradkaba. Soomaalidu waa inay nabada ka wadahadlaan dalkooda ugu wadahadalaan. Kuwa ku guuldareysta inay ku soo biiraan geedi socodka Nabada waxay waayi doonaan fursada ay uga qeyb qaadan lahaayeen dib u dhiska wadankooda, Xafiiskayga wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu gacan ka geysto sii socoshada wadahadallka ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ah.
Waxaa la gaaray waqtigii xoogga la saari lahaa wax ka qabashada baahida iyo masaaliixda dadweynaha Soomaaliyeed ee caadiga ah, kuwaas oo loo diiday cunto si ay uga deeqtoomaan Gaajada badbaadona oga samaystaan cabsida, dhibaatada Ummadda haystaahi waa in ay ahaataa mid soo jiidata Quluubta dhamaan wadaniyiinta Soomaaliyeed, waana in ay ahaataa arinta ugu muhiimsan ee bulshada caalamka wax ka qabanaysa. Dadkaan dhibeysan waxaa loo haystaa wadankoodii madaxfurasho, waxaana u haysta koox yar oo faa?idadooda gaar ah ee degdeg ah doonaaya. Dhab ahaantii nabadgelyo la?aanta ayaaba noqotay hab lagu helo dhaqaale iyo awood.
Dadka Soomaaliyeed dhibaato aad u badan ayey u adkaysteen-Caruurtoodii ayaa hortooda lagu dilay, gacmaha looga jaray, lagu kalifay inay dalkooda ka cararaan marar farabadan, waxaana loogu xadgudbay Xuquuqul insaankooda si aanba xad lahayn, dhibaatada Ummaddan loo geysanaayo waa in ay dhamaataa si nolol caadi ugu noolaadaan wadankooda sida ka jirta wadamo badan oo Africaan ah.
Waxaan cambaareynayaa afduubka loogeysanaayo dhamaan dadka Soomaaliyeed iyo Ajaaniibta aan waxbageysanin kuwasoo loohaysto madax furasho waxaan a ku baaqayaa in loo siidaayo si shuruud la?aan ah, waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadka Soomaaliyeed iyo kuwa aan Soomaalida ahaymba ee sida tooska iyo sida dadbanba gacanta ugu geysan kara sii deysmaada dadkan la ahaystaa inay gacan ka geystaan sii deysmada. Falkan ka baxsa n beni?aadanimada ee afduubka ahi sinabada uma kaalmeynayaa magaca iyo muuqaalka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan cambaareynayaa boobka loo geystay xafiisyada Qaramada Midooway ee ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliyeed, sidoo kale iyo howlgalka lagu aamusinaayo Warbaahinta iyadoo la adeeganaayo cagajugleyn, Baad iyo dil lala beegsnaayo suxufiyiinta.
waa in si dhab ah wax looga qabtaa su?aasha ku saabsan helitaanka caddaalada, waa in ajendaha meel sare kaga qornaataa la dagaalanka dhaqanka ku fadhiya IMPUNITY (Dembi inta la galo haddana aan leys xisaabinin) iyo xadgudubyada kaleeto ee loo geysanaayo dadka rayidka ah. Sidaasi dartteed, bulshada caalamku waa in ay ka kaalmeyso dadka Soomaaliyed sidi mustaqbalka arimahooda wax uga qaban lahaayeen, sababtaas darted ayuu Xafiiskayga bisha soo socota u qabanqaabinayaa shir. Kooxda la socoshada arimaha dalka ee saldhigeedu yahay Nairobi ayaa si aad ah isugu dayaaya inay sheegaan ama tilmaamaan kuwa laga yaabo in lagu soo rogo cunaqabateynta.
Guuldarooyibnkii horey u dhacay waa in ay naga niyad jebinin inaan talaabo horey u qaadno mustaqbalka si aan u kaalmeyno ama door ugu ciyaarno helida soo celinta nabadda. Waqti dhow iyo midka fogba waxaa jira talaabooyin la taaban karo ee uu Golahani qaadi karo:
* Maadaama ay Xukuumadu qaaday talaabooyin muhiim ah waxay weli usii baahan tahay taageero degdeg ah ee siyaasadeed iyo dhaqaalebo si xaalada wax looga qabto. Maamulada ka jira Puntland iyo Somaliland ayaa iyagu dhaqaale u baahan si ay u waarto degaanshaha meelahooda ka jirta.
* Taageero deg deg ah ee la taaban karo waa in la siiyaa AMISOM. Ciidamada ururka Midowga Africa waxay muujiyen geesinimo taariikhi ah iyo sida ay uga go?an tahay in ay u garab istaagaan Ummaadda Soomaaliyeed. Waxay mudan yihiin inay helaan taageerada dhamaan Xubnaha Golaha Amaanka.
* Taageero la siiyo go?aanada Urur Goboleedka IGAD,iyo kan Midowga Africa ee ku aadan arimaha Soomaaliya ayaa aad waxtar u leh, u dhowaanshaha ay u dhow yihiin wadanka, aqoonta ay u leeyihiin iyo sida ay u danaynayaan arimaha Soomaaliya darted, Wadamada IGAD xubnaha ka ah waa in loo aqoonsadaa inay ka ciyaaraan arimaha Soomaaliya door hogaamineed.
* Waxaa la gaaray waqtigii Qaramada Midooway ay muujin lahayd inay ka dhab tahay in ay u guurto Soomaaliya. Waxaa aad u daahay joogitaankanaga ku meelgaarka ah ee Nairobi. Waxaan si dhab ah ugu howlgeli karnaa waxkaqabashada arimaha la xiriirta nabada iyo baahida beni?aadanimo ee degdega ahi keliya haddii aan u dhownahay dadka ay gaajada, nabadgelyo la?aanta iyo ku xadgudubyada kala gedisan wax u dhimeen. Xafiiskayga iyo Hay?adaha kale ee muhiimka ah ee Qaramada Midooway oo ay ka mid yihiin kuwa qaabilsan arimaha Beni?aadanimada iyo Diblomasiyiinta iyo NGOyada kale ee danaynaya Soomaaliya waa in ay u guuraan Mogadishu. Dhismaha goobo nabadeed (Green Zone) sida kuwa ka jira meelo kale oo aduunyada ah ayaa fududeyn lahayd arintan.
* Waa in la wadaa taageerada ku aadan wax ka qabashada burcad badeeda. Joogitaanka ay joogaan Maraakiibta Caalamiga ah Badaha Soomaaliyeed ayaa ah isbarbartaag Caalami ah oo loo muujinaayo Ummadda Soomaaliyed joogitaanka Maraakiibtaan oo ka socota wadamo fara badan ayaa aad wax u tartay. Maraakiibtani waa inay sii wadaan joogitaankooda, isla markaana waana in taageero loo fidiyaa dhismaha Ilaalada Xeebaha Soomaaliya, sidoo kale su?aasha la xirirta in dhibaatada burcadbadeednimada wax looga qabto dhinaca dhulka gaar ahaan habkii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada waa in iyaduna si deg deg ah wax looga qabtaa.
Dhab ahaantii, Soomaaliya arinteedu waa mid adag ?hase ahaatee dhibaato marwalba waa jireysaa waana inaynan noqon sababta kalifaysa inaan talaabo la qaadin-. Bulshada Caalamku waa inaysan gacmaha ka laaban waajibaadkeeda ka saran dadka, hadda waxaa loo baahan yahay talaabo waxtar leh, haddii aanan hadda la qaadin talaabadaas goorma ayaa la qaadayaa? Haddii Golaha Amaanka talaabo uusan qaadin yaa talaabo qaadaya? ?Waxaan aad u ognahay in guusha sheydaanku ay ku xiran tahay oo keliya in aan raga wanwanaagsan talaabo qaadin?.
Dhamaan dadka dunida waxay u ooman yihiin helitaanka Nabad, Amni iyo Sharaf ?dadka Soomaaliyeedna kama gedisna dadka aan sheegayno- waxaana loo diiday Ummaddan baahidooda dhabta ah ah 20kii sano ee la soo dhaaftay. Booqashadii Golaha Amaanka uu ku tagay Jabuuti sanadkii hore waxay aad kor ugu soo kicisay dareenka Wadamada Gobolka ka jira- iyagoo isleh in Golaha Amaanka uu door ka qaato nabad ku soo celinta Soomaaliaya- arintan waxay kor u qaadidaysaa magaca Qaramada Midooway ku leedahay wadamada Africa. Hadda waxaan taaganahay wakhtigii talaabada la qaadi lahaa.
Waa mahadsan tahay.